Posted By: KongoLisolowaa: Nofembar 3, 2018 00: 15 1 Comment
Laakiin madaweynaha ajnabiga ah, gaar ahaan Afrikaanka, had iyo jeer waxay ka fikiraan madaxooda in cadaawayaashoodu ay jecel yihiin. Ma waxay u yimaadeen inay iyaga ka samata bixiyaan dhibaatada ay u abuuray iyaga?
Gaar ahaan maadaama ay si joogta ah u abuuraan habab kale oo addoonsi casri ah?
Kaliya gumeysi ayaa u maleynaya in cadadu yihiin saaxiibo madow, gaar ahaan madow Afrika.
qof aan waxba galabsan
26 / 09 / 2018 16 h 35 min
Bilow wadahadalka ... akhri maahan saaxiibadayada qaaliga ah ee walaalaha Afrikaan ah
Sep29 02: 35